"လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းငါအော်ဂဇင်မနိုင်၊ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း" - Porn On Your Brain
မှတ်ချက်များ - မေးခွန်းကိုမေးသူကရောအင်တာနက်ကနေညစ်ညမ်းတာကိုမဖော်ပြဘူးဆိုတာကို ဦး စွာသတိပြုပါ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ မှတ်ချက်များစွာ (အောက်တွင်ပါ ၀ င်သည်) သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ မိန်းမတ ဦး ၏ရည်းစားတွင် ED ရောဂါပိုးရှိနေပြီးကျန်ရှိနေသေးသောကျန်ရှိနေသေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုများရှိနေသေးသည်။
ငါကျန်းမာသောသူသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်အင်္ဂါဇာတ်လိင်၏ 20 မိနစ်အကြာတွင်အော်ဂဇင်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏, ဒါကြောင့်ငါထပေးပါ။ ငါထွက်ပျောက်ဆုံးလား
Pamela Stephenson က Connolly
အုပ်ထိန်းသူ, တနင်္ဂနွေ2ဖေဖော်ဝါရီလ 2014
မှတ်ချက်များ (137) ဤနေရာသို့သွားရန်
ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသော ၃၂ နှစ်အရွယ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းလိင်အင်္ဂါမှလိင်မှတဆင့်အော်ဂဇင်မပေးနိုင်ပါ။ ငါနောက်ဆုံးမှာအဲဒီကိုရောက်နိုင်ပေမယ့် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အကြာမှာအရှုံးပေးတတ်တယ်။ လိင်ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မထားသင့်ဘူးဆိုတာကျွန်မသိပေမယ့်ကျွန်မပျောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။
လူငယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအပျော်အပါးသည်အရေးကြီးသောလိင်မှုဆိုင်ရာခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်တခါတရံလူတစ် ဦး ၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ပုံစံသည်မိတ်ဖက်လိင်ကိုလွယ်ကူစွာပေါင်းကူးနိုင်ခြင်းမရှိသောအရာဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူတစ်ယောက်သည်အလွန်ကြမ်းတမ်းစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်စတိုင်လ်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်မည်သည့်ယောနိကမျှလိုအပ်သောပွတ်တိုက်အားကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောစတိုင်ကိုစဉ်းစားပါ - မလိင်အင်္ဂါအထွive်အထိပ်သို့ရောက်နိုင်သောအခြားလေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖိအားကိုလေ့ကျင့်ရန်လိုကောင်းလိုပါမည်လော။
လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်း orgasming မှနောက်ထပ်အတားအဆီးအာရုံစိုက်မရှိခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အချို့လူများကအလွယ်တကူအာရုံပြံ့လှငျ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှောင့်ယှက်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတှေးသို့မဟုတ်ခံစားချက်တွေကိုလမျး၌ရတဲ့လျှင်စဉ်းစားကြည့်ပါ, ဒါကြောင့်ပါလျှင်, အာရုံခံစားမှုနှင့်ပျော်မွေ့၏ပေးကမ်းခြင်းနှင့်လက်ခံမည့်အပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားပါ။
ကိုယ် ၀ န်၊ ရောဂါနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးရခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏လိင်ဆိုင်ရာဘဝကိုပျော်မွေ့သောကြောင့်၊ သင်အမှန်တကယ်“ ပျောက်ဆုံးနေသည်” မသေချာပါ။ သင်စိတ်ပူလေလေ၊ သင်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းအထွတ်အထိပ်ရောက်လေဖြစ်နိုင်သည်။
Pamela Stephenson က Connolly သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုခံယူသူဖြစ်ပြီးလိင်ဆိုင်ရာရောဂါများကိုကုသရန်အထူးပြုသည်။ လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ Pamela Stephenson Connolly ထံမှအကြံဥာဏ်များလိုပါကသင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြပါ[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]">[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်](ပူးတွဲဖိုင်များမပို့ပါနှင့်)
One comment thread:
အလေးသာတာကတော့သင်ဟာ porn ကိုအရမ်းလွမ်းတာပါပဲ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏“ သင်၏ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်” ဂူဂဲလ်တွင်“ အလွန်အကျွံ” သောအင်တာနက် porn ကိုသုံးသောယောက်ျားများစွာသည်စစ်မှန်သောဘဝ၌လိင်မှုအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သတိပြုပါ၊ ဤစာမူသည်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စာရိတ္တနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လည်းမရှိပါ။ သင်၏ mojo ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ကူညီနိုင်သောထိုနေရာတွင်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များစွာရှိသည်။
BlughGrant xtrapnel မှ
ငါသည်သင်တို့ကိုအကြံပြုသောအရာကို googled နှင့်ရလဒ်အချက်အလက်များနှင့်အလားအလာအလွန်အသုံးဝင်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောကျေးဇူးတင်စကား!
cbr600 သို့ xtrapnel
Dunnyboy xtrapnel မှ
ဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေ (ယူဆရယောက်ျား), သင့်ရဲ့ post ကိုဖွင့်အများအပြားယောက်ျားပြီးသားပြီးသားရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အကြံဉာဏ်ယူကြပြီကိုပြသသွားရန်အကြံပြုကြပြီ။ အမှန်မှာ
petgaijin xtrapnel မှ
ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ၊ အကြံဥာဏ်ကောင်းပေမဲ့ 'Porn on the Brain' ဆိုတဲ့ googling ဟာလည်းအလုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Channel4မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။
bobbymac1956 xtrapnel မှ
အကယ်၍ သူကအရမ်းလှည့်စားနေမယ်ဆိုရင်သူဟာ porn ကိုဂရုမစိုက်သင့်တော့ပါဘူး။
ဒါဟာတကယ်ကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် အမျိုးသားများသည်ထိုကဲ့သို့သောဆိုဒ်များသို့ IM နှင့်အီးမေးလ်များကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူငယ်ချင်းများထံမှ“ ကျေးဇူးတင်စကား၊ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်” အကြောင်းပြန်ကြားချက်ကိုရလေ့ရှိသည်၊ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့သည် Facebook ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်တင်လေ့မရှိပါ။ ၎င်းတွင် CiF ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသင့်သည်။
petgaijin bobbymac1956 မှ
မဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ဘူး! ညစ်ညမ်းခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဘိန်းဖြူကဲ့သို့ပင်စွဲလမ်းမှုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများစွာထွက်ပေါ်လာသည်။ ရှာဖွေရေးဝေါဟာရတစ်ခုမှာ 'သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှု' ဖြစ်သည်၊ သင်၏ ဦး နှောက်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရိပ်အမြွက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အပြီး 'နှင့်' ဦး နှောက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်း 'ဖြစ်နိုင်သည်။
အကြောင်း, အထောက်အထားသက်သေပြဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အများအပြားကလည်း, သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားဥပမာလုံးဝသငျနှငျ့အတူသဘောတူလိမ့်မယ်။
raerae25 xtrapnel မှ
ငါသူ့ကိုတွေ့သောအခါနှစ်ခုနှစ်ကျော်ငါ့ရည်းစား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်သူ၏ Zenith မှာသူတစ်နေ့လျှင်9ကြိမ်အကြောင်းကိုညစ်ညမ်းမှ masturbate မယ်လို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်မနာလိုသောရည်းစားတစ် ဦး နှင့်တူသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည့်အခါတွင်၎င်းကိုထုပ်ပိုးရန်ကျွန်ုပ်သူ့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သည်။ လအနည်းငယ်အကြာတွင်သူသည်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်စိုက်ထူမှုတစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်ရံဖန်ရံခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေဆဲဖြစ်ပြီးသူသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အလွန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင် ၄ ကြိမ်သာ) အော်ဂဇင်ကိုသာရံဖန်ရံခါပြုလုပ်နိုင်သည်။ အော်ဂဇင်ရန်သူသည်အဝေးမှရုပ်ပုံနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့လိုသည်။
ဤသည် Ted Talk ကိုဤပြဿနာကိုဖော်ပြသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကစာရေးဆရာရဲ့ပြproblemနာမဟုတ်ဘူး၊ ပုံမှန်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွေအကြားလက်ရှိပတ် ၀ န်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကို Pamela ကဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအနေနဲ့မဖော်ပြထားဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။
သင်သည်သင်၏မှတ်ချက်အတွက်အခြကြောင့်သူတို့ဝေဖန်သို့မဟုတ်ပင် pornocopia မေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ရှေးရှေးအဖြစ်အပြုသဘောဗစ်တိုးရီးယားကိုဖြတ်ပြီးလာမယ့်အလွန်ကြောက်လန့်ဖြစ်ကြောင်း, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
elmondo2012 xtrapnel မှ
သဘောတူသည် - သင်၏ ဦး နှောက်ညစ်ညမ်းမှု - ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်ယနေ့အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းမှုအတွက်သင့် ဦး နှောက်ကိုပြင်ဆင်မထားပါ။
whitworthflange xtrapnel မှ
raerae25 whitworthflange မှ
ယောက်ျား၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်း (နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအပြောင်သို့သော်သိသိသာသာရာခိုင်နှုန်း) ပုံမှန် porn စောင့်နေကြလော့။ လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ဒီအလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူအိမ်မှာရှိနေတဲ့မှရတဲ့နေကြသည်။ moralistic ဖြစ်ပေမယ့်တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းငှါမအချက်များအတော်များများပေါ်အခြေခံပြီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူ့ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါပြောတဲ့ယောက်ျားအတော်များများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရုန်းကန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလို့မယူဆကြဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခေတ်မှာယောက်ျားတွေဟာညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်တဲ့ 'ပေးထားတယ်' လို့ယူမှတ်ထားလို့ပါ စကားလုံး 'ပုံမှန်' ဆိုသည့်ဝေါဟာရသည်ပြorနာမဟုတ်၊ ထိခိုက်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။